ဧရာညီနောင်: သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Video chat ရင်ကိုယ်ဘက်ကနေ Webcam Effects လေးထည့်ရအောင်
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Video chat ရင်ကိုယ်ဘက်ကနေ Webcam Effects လေးထည့်ရအောင်
Video chat သမားများအတွက် pre-recorded video, photo albums, animations and desktop screens လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးဆော့ဝဲလ်လေးတစ်ခုပါ......webcam chat software or online chat website – MSN Messenger, Yahoo! Messenger, PalTalk, Skype, AIM, ICQ, Camfrog, ANYwebcam and many others အားလုံးကို အကောင်းဆုံး support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်......။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး funny photo frames, do text, image, animation, video overlays တွေကိုလည်း video effect ထည့်လို့ရပါသေးတယ်......။ Webcam Effects လေးတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Home Page ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါနော်..........း)
- Doalive desktop screen streaming by capturing screen as well as sending it out at the same time. With this option, you can send back your friend’s live video likeamirror. Also, using this virtual camera, you can keep your privacy by pretending to be some one else. Even more, freely add magic video effects to the video!
Home Page – http://www.shiningmorning.com/
Posted by ဧရာညီနောင် at 6:01 AM